नागरिकले सरकारप्रति कस्तो अपेक्षा गर्ने ? – TibraKhabar (तीव्रखबर डटकम) छिटो खबरको एउटै विकल्प
नागरिकले सरकारप्रति कस्तो अपेक्षा गर्ने ?
प्रश्नै प्रश्नले जकडिएको छुँ, मानौँ यसरी पिल्सिएकी छुँ कि, जसरी मेरो देश बर्षौदेखि पिल्सिएको छ । निश्पाप निस्कलंक अनुत्तरित ! लाग्छ, यो धैर्यताको बाँध टुट्दै गयो भने कसरी सामान्य बन्ला र दिनचर्या ? कसरी गर्न सकिएला काम ? विश्वको अवस्था दिनप्रतिदिन कहालीलाग्दो हुँदै गैरहेको छ । आफ्नै घरमा आगो सल्किसकेको छ । देशमा पर्याप्त सावधानी अपनाइएको छैन । कर्यौ दिनदेखि क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलेसमेत स्वास्थ्य उपचार त परको कुरा, कोरोनाको परीक्षणसमेत गराउन पाएका छैनन् । क्वारेन्टाइनमै मृत्युवरण भैसकेपछि परिक्षण हुन्छ अनि नतिजा आउँछ पोजेपिटभ । सरकारको बेवास्ताका कारण कोरोना संक्रमितले उपचार नै नभै, अझ भनौँ रोगको पहिचान नै नभै नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ । कस्तो विडम्वना ! यो अवस्थाले नागरिकले सरकारप्रति कस्तो अपेक्षा गर्ने ? अनि क्वारेन्टाइनमै बसेका हजारौँको मनस्थिति कस्तो होला ? यहीँ छिमेकी तर मित्रराष्ट्र बन्न नसकेको भारतले नेपाली भूमि हडप्न कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । एकातिर कोरोनासँग लड्नु परेको छ भने अर्कोतिर छिमेकीसँग । त्यो पनि आफ्नै भूमिका लागि । आफ्नै भूमिको पहरेदार अरुलाई तोक्नुको चरम पीडा भोग्दै त्यही छिमेकी देशबाट स्वदेश फिर्न कर्यौै दिन सीमामा छट्पटाउनेको मनको कुण्ठाको त यहाँ हिसाब किताब नै छैन । उनीहरुको पीडा अनुभूति गर्न नसक्ने सरकारलाई के भन्ने ? एक पटक सोच्ने कि सरकार ? हैन भने आफ्नै देशको विद्रोहको विगुल फुक्दै उसैले दिएको गाँस निल्न कति कठिन होला स्वाभिमानी नेपालीलाई भारतीय क्वारेनटाइनमा ? नत्र रेलका डिब्बामा यसरी किन कोचिदै छन् ? सीमा विवाद बल्झिएको अघिल्लो वर्षको कात्तिक महिनादेखि हो । जब भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा बनायो, त्यसमा नेपालको भूमि नै समेटिदियो । यस्तो अन्याय कसले सहन सक्छ र ? नेपालले पटकपटक सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि कुटनीतिक वार्ताका लागि आग्रह गर्यो, तर आफूलाई ठूलो ठान्ने भारतले आग्रह लत्यायो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालकै हो भन्ने प्रशस्तै ऐतिहासिक दस्ताबेज छ भन्ने जानेर नै हो, भारतले वार्ता गर्न नचाहेको । भारतले अलमल र आलटाल गरेरै नेपाली पक्षलाई निरन्तर झुक्याउने र आफ्नो रणनीति कार्यान्वयन गर्ने कहिलेसम्म ?
यस्तो कुरा त्यही देशमा मजदुरी गर्दै गर्दा कहाँ बुझ्न सक्छौं र हामी ? बुझे पनि अवलम्बन गर्न सकिएला र ? झन्डै ६६ वर्षे कालखण्डमा नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको दाबीसहित घनिभूत संवाद गरेको छैन । दुई देशको संयुक्त प्राविधिक समितिले सीमा विवाद टुंगो लगाउन झन्डै १७ वर्ष काम ग¥यो रे । तर उक्त क्षेत्रलाई विवादित भन्नेबाहेक थप कुराकानी नै भएनछ । धन्य हो संयुक्त प्राविधिक समिति । सन् २००१ मा भारतमा नेपाली दूतावासकै पहलमा संवाद भएको थियो, कालापानीकै विषयमा । तर किन त्यो बहसले निरन्तरता पाएन ? नेपालसँग भएका प्रमाण, कालापानी क्षेत्रमा स्थानीयले तिरो तिरेका कागजातका विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल भएको थियो भन्ने इतिहास रहेछ ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई पर्याप्त पीपीईको व्यवस्था समेत छैन कसरी उपचार गर्ने ? आइसोलेसनको मापदण्ड र समस्याको जड के हो त ? सबै मानिसको प्रतिरक्षा क्षमता उस्तै हुँदैन अनि संक्रमण भएपछि अस्पतालले सन्तुलित आहार प्रदान नगर्दा संक्रमित विरामीमा रुपान्तरण हुन बेर लाग्दैन । कोरोनाभाइरससँग सङ्घर्ष गर्न सक्ने मानिसको प्रतिरक्षा क्षमताबारे धेरै अनुमान गरिएको छ । हुन सक्छ संक्रमण भएर पनि लक्षण क्यै नदेखिनुको नतिजा नै त कतै मृत्यु हो कि सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरीको ? सिन्धुपाल्चोकको हृदयविदारक घटनाबाट हामी गुज्रिएका छौं । विश्वभरी लाखौँ मानिस कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएका छन् । कैयौँ आमाले सन्तान गुमाएका छन्, कयौँ सन्तानले आमा गुमाएका छन् । अकल्पनीय छ नवजात शिशु र आमाको कोरोनाले दिएको कथाको व्यथा । आमाको मृत्यु भएपछिको अवस्था अनि नवजात शिशु उफ १ शिशुलाई आमाकै काख र स्तनपान अति आवश्यक हुने नवजात शिशुको के हालत होला ? आमाले कोरोना संक्रमणका कारण मृत्युवरण गरेपछि बच्चामा त्यसको प्रभावको बारेमा यसो कल्पना गरौँ न, मन कुँडिन्छ आँखा रसाउँछ ! भोग्नेलाई कस्तो होला सन्तान आमा खोजेर रुदैछ, उसलाई फकाउन समाल्न नपाउने परिवारजनको स्थिति उस्तै कारुणिक । धन्न यी बालक र परिवारजनमा संक्रमण रहेनछ । अहिले शिशु र परिवारका सदस्य कसैलाई पनि कोरोना पोजेटिभ नदेखिदा मन बुझाउने बाटो त पाएका छौँ, तर संक्रमित आमाको काखमा बसिसकेका शिशुको स्वास्थ्य आगामी दिनमा सधैँ ठीक रहला या नरहला ? यो आशंकाले पक्कै पनि शिशुको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेलाई सधै सताइरहन सक्छ ।
यदि कुनै बिरामीको शरीरले कोरोनाभाइरसँग राम्ररी संघर्ष गरेको छ भने उसको प्रतिरक्षा क्षमता राम्रो हुन सक्छ । कुनै बिरामीमा दोस्रो पटक पनि यो भाइरस देखिएको विषय संक्रमण भए नभएको परीक्षण गर्ने विधि र पद्धतिको विश्वसनीयतासँग पनि गाँसिएको हुन्छ । त्यो विधिले कहिलेकाहीँ सही परिणाम नदेखाएको पनि हुन सक्छ । कोरोना भाइरसले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्ने कुरा पनि निकै खतरनाक हुनसक्ने विज्ञहरुले दाबी गरेका छन् भने यो पाटोलाई कतै हामी नजरअन्दाज त गर्दै छैनौँ ? यो के कति खतरनाक हुन सक्ने भन्ने चुनौती सामना गर्न त सक्दैनौँ भने यो हेलचक्रयाई के का लागि रु चिन्ताको विषय कोरोना मात्र हैन, अब त भाइरसहरूले आफ्ना स्वरूप फेरे भने तिनलाई मानिसको प्रतिरक्षा प्रणालीले नचिन्ने पनि हुन सक्ने रहेछ । कुनै भ्याक्सीन वा खोपको विकास गरिहालियो भने पनि त्यसले काम नगर्ने अवस्था आउन सक्ने रहेछ, भाइरसले स्वरूपमा परिवर्तन गरेकै कारण । फ्लू रोग नियन्त्रण गर्ने खोपले राम्रो काम नगरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । अबको अवस्थामा हामीले के के कुरामा सावधानी अपनाउने भन्ने कुराको चिन्तन गरौँ । कोरोनाको संक्रमण बढ्दो छ तर मास्क, पन्जा अनी स्यानीटाइजरको माग त थेग्न नसकेको सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई ल्याउने, क्वारेनटाइनमा राख्ने, संक्रमणको परीक्षण गराउने भन्ने कुरा पनि व्यवस्था गर्ला र ? यदि सरकारले यसमा तत्परता देखाएको हो भने सघाऔँ ।
संक्रमितका परिवार र आसपासमा भएकाहरुको मनोभावको अवस्थाप्रति कसरी मूल्याङ्कन गर्दैछौँ हामी ? निकै गम्भिर छ अवस्था । संकटको यो घडिमा मानसिक अवस्थाको अध्ययन कहिले कसरी गर्ने त हामीले रु कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण त्रसित भएको हाम्रो स्वस्थ मन र मष्तिष्कको आधार के त रु विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लूएचओले मृतक, उनीहरूको संस्कृति र धार्मिक परम्पराका साथै परिवारको पनि प्रतिष्ठा कायम राख्नु पर्ने बताएको भए पनि यी कुराहरुप्रति समभाब राख्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिएला त रु र यो सबै गर्न नपाउँदाको विचलनप्रति जिम्मेवार को ?
५९ जना संक्रमित र एकजना सात महिने शिशुसहित ६० जनालाई २५ वटा बेडमा राखिँदा संक्रमितको मनोदसा कस्तो हुन्छ होला ? सुन्नु र बुझ्नुमा फरक पर्ने यही हो, जहाँ हामी हरेक चोटी चुक्दैछौं । क्वारेन्टाइनमा कतिका त साना साना बच्चा सँगै छन् । उनीहरु स्वभावैले चन्चल र मृदुभाषी हुन्छन् । ति नानी बाबु निकै जोखिममा त्यहाँ रहन्छन् भने अरुमा पनि संक्रमण हस्तान्तरण गराउने सम्भावना सृजना हुन सक्छ । हाम्रा बाबु नानीलाई सरसफाइमा ध्यान दिन प्रेरित गरौ । खेलकुदमा रमाउने बच्चाहरू स्वभावैले धेरै मानिससँग घुलमिल हुन्छन् । उनीहरुको चंन्चलताले जोखिमलाई हस्तान्तरण गरेको हुन सक्ने तर्फ विचार पु¥याउँ । घरमा हेरचाह गर्ने मानिस नभएको भन्दै संक्रमण नै नभएको शिशुलाई संक्रमित आमासँगै राख्नुको पीडा कस्तो हुन्छ ति आमालाई रु समाचारका अनुसार तथ्याङ्कमा देखिने वा पुष्टि भएका मानिसको संख्याले वास्तविक सङ्क्रमणको प्रतिनिधित्व गर्दैन रहेछ । त्यो संख्या अझै अपूर्ण किन छ भने सङ्क्रमण भएका कैयौँ मानिसमा लक्षण नै देखिएको छैन । यसले गर्दा संक्रमणको संख्या धेरै नै हुन सक्ने सम्भावना रहने नै भयो । यसर्थ संक्रमण बढ्दैछ चिकित्सक, पत्रकार, प्रहरी पनि कोरोना संक्रमीत भएका छन । हामी त झन बढि जोखिममा पुग्दैछौँ । सावधानी अपनाऔँ, कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऔँ । (लेखिका धिताल प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा कार्यरत हुनुहुन्छ)